Windows XP ရဲ့ ရိုးစင်းတဲ့ လျှို့ ဝှက်ချက်(၄၀)- ~ ဗိုလ်လှိုင်း (ဆိပ်ဖြူသားလေး)
Home » Pc Game » Windows XP ရဲ့ ရိုးစင်းတဲ့ လျှို့ ဝှက်ချက်(၄၀)-
Windows XP ရဲ့ ရိုးစင်းတဲ့ လျှို့ ဝှက်ချက်(၄၀)-
Monday, July 29, 2013 Pc Game
ဘယ်ဘက် panel မှာ “HEYCURRENT USER” ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ အဲဒီထဲ ကမှ “control panel” ကို ထပ်ရွေးပါ။
“Control panel” ထဲကမှ Desktop ကို ရွေးပါ။
ညာဘက်အကွက်မှာ ပေါ်လာတဲ့ “Menushowdelay” ကို Right click နှိပ်ပါ။ Modify ကိုရွေးပြီး Value ကို “0″ ထားပါ။
ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ Restart ပြန်လုပ်ပါ။
- အဲဒီမှာ တွေ့သမျှ ဖိုင်တွေကို ‘Ctrl+A’ နဲ့ Select ပေးပြီး ဖျက်ထုတ်ပစ်ပါ။
(အချို့  လုပ်ဆောင်နေဆဲ ဖိုင်တွေကိုတော့ ဖျက်လို့မရတဲ့ အကြောင်း ပြောလာတတ်ပါတယ်။)
All Program ကိုသွားပါ။
- Accessories ကနေတစ်ဆင့် “System tools” အောက်မှာ ရှိနေတဲ့ “Disk Clean Up” ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
၅ မိနှစ်အတွင်းမှာ ပုန်းကွယ်နေတဲ့ အမှိုက်သရိုက်တွေ မှန်သမျှကို ရှင်းလင်းပေးပါလိမ့်မယ်။
(ကိုယ်အနေနဲ့ အပြင်ကို ခဏတဖြုတ် သွားမယ့် အချိန်မျိုးတွေမှာ သိပ်အသုံးဝင်ပါတယ်။)
- XP ရဲ့ default မှာ memory ရေရှည် အသုံးခံနိုင်အောင်နဲ့ တခြား လိုအပ်တဲ့ စနစ်ပိုင်း ဆိုင်ရာတွေကို မောင်းနှင်ဖို့ စီမံထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်ခါတလေမှာ ကိုယ့်အတွက် အသုံးမ၀င်ပါဘူး။ ရှိရင်းစွဲ memory ကိုပဲ လှည့်ကွက်တစ်ခု အနေနဲ့ ပိုပြီး ကောင်းမွန်အောင် သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ဖိုင်တွေ၊ folder တွေ၊ ebook စတာတွေကို လုံခြုံစေဖို့ နည်းလမ်းအမြောက်အမြား ရှိပါတယ်။ password ပေးပြီး သိမ်းဆည်းထားတာဟာ အလုံအခြုံဆုံးပါပဲ။
အဲဒီလို password ပေးတဲ့အခါမှာ သိမ်းဆည်းချင်တဲ့ ဖိုင်တွေကို folder တစ်ခု ထဲကို အရင်ထည့်ပါ။
ပြီးရင်ကိုယ်မှတ်မိတဲ့ Name ပြောင်းပါ။ ပြီးရင် Windows ရဲ့ built-in zip format ကို password ပေးပါ။
Winrar Software ကို install လုပ် ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့- ဖိုင်ကိုကလစ်ထောက်လိုက်ပြီး ချုံ့ပေးပါ…လို့ ခိုင်းပါ။
- Advanced မှာ “Set password” ကို click နှိပ်ပါ။ - Password line နှစ်ကြောင်း တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု တူညီရပါမယ်။
(၁၁) ပရိုဂရမ်ရဲ့ အမြန်နှုန်းတွေကို မြှင့်တင်ပါ။
ရဲ့ အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ ‘taskbar’ ကို Right click လုပ်ပါ။
ကို ကွန်ပျူတာ သမားတွေ အသိများပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့မှာ ကိုယ်သုံးစွဲထားခဲ့တဲ့ ပရိုဂရမ်တွေအတိုင်း ပြန်ပေါ်ထွက်လာအောင် စီစဉ်ပေးထားတာပါ။
ဒါပေမယ့် memory ကို အရမ်းစားပြီး hard disk မှာလည်း မတရား နေရာယူလွန်းပါတယ်။
ဆော့ဖ်ဝဲ နှစ်ခုလောက် အပြိုင်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါ ‘Memory Inerupt’ ဆိုပြီး ဆော့ဖ်ဝဲ တစ်ကို ပိတ်သွားတာမျိုး ရှိသူတွေအတွက် လျှော့ချသင့်တဲ့ ပုံစံတွေ ရှိပါတယ်။
XP မှာ အသစ်ပေါင်းထည့်ထားတဲ့ feature အသစ်ဟာ momery ကို အလွန် သုံးစွဲသလို “Thames” တွေကလည်း memory ကို သုံးစွဲပါတယ်။
ဒါကြောင့် Style XP လို “Thames” တွေကို memory မြင့်မြင့်မားမား မရှိဘဲနဲ့ install မလုပ်ပါနဲ့။ Window ရဲ့ ဂန္တ၀င် ပုံစံဟာ memory ကို ချွေတာရာရောက်ပြီး အလုပ် များများရှိတဲ့ လူတွေအဖို့ သင့်တော်ပါတယ်။
- Control Panel > System ၊ Advanced tab ရွေးချယ်ပါ။
အင်တာနက် ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ ပီစီတွေ အဖို့တော့ Automatic update ကို ပိတ်ထားတာဟာ အဆိုးရော အကောင်းရော ဖြစ်စေပါတယ်။
အဆိုးကတော့ browser မှာ ထည့်သွင်းထားတဲ့ ‘add-ons’ လို update တွေမရနိုင် တော့ပါ။ အကောင်းဘက် ကတော့ memory ကို ပိုမို များပြားစွာ သုံးစွဲစေပြီး XP ကို ပိုမြန်စေပါတယ်။
- Desktop မှာ New Floder ဖန်တီးပြီး ‘Application’ လို့ အမည်ပေးပါ။ ပြီးရင် ပရိုဂရမ် တွေရဲ့ Shortcuts တွေ မှန်သမျှ - ထည့်ပေးပါ။
- Desktop မှာ Right Click နှိ်ပ်ပါ။ New shotcut ကို ဖန်တီးပါ။ နာမည်မှာ ’shutdown-s-to’ လို့ အမည်ပေးပါ။
- ပြီးရင် properties ကို သွားပါ။ Target နေရာမှာ “C:/Windows/system32/shutdown.exe”ကို ရွေးပေးပါ။ (XP.SP2 - သမားတွေအတွက်တော့ အလွယ်တကူနဲ့ C > Windows > System32 > “shutdown icon” အထိ သွားပြီး shutcut - ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။)
ဆိုတာ Select All ၊ Ctrl+C ဆိုတာ Copy ၊ Ctrl+V ဆိုတာ Paste အဲဒီလိုိမျိုး မြန်ဆန်စေတဲ့ ကီးဘုတ်ဖြတ်လမ်း နည်းလေးတွေကို သုံးစွဲကြည့် နိုင်ပါတယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ တချို့  Fonts တွေဟာ ဥပမာအားဖြင့် ကိုယ်ဟာ စာစီစာရိုက် သမားတစ်ယောက်၊ Web designer တစ်ယောက်မဟုတ်ရင် မလိုအပ်တဲ့ font တွေကို အပြီးတိုင် ဖယ်ထုတ်ထားလို့ ရပါတယ်။
Photoshop လို ပရိုဂရမ်မျိုးဟာ ဖွင့်ချိန် အရမ်းကြာမြင့်တာဟာ သူ့ရဲ့ library ထဲကို အသင့်သုံးပစ္စည်းတွေကို ခေါ်ယူနေတာကြောင့်ပါ။
အဲဒီ လိုမျိုးပဲ တခြားပရိုဂရမ်ေ်တွဟာ ကြာနေတတ်တာဟာလည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုး ရှိနိုင်ပြီင်္း အဲဒီထဲက အကြောင်းတစ်ခုက ‘Fonts’ တွေကို loading လုပ်နေရလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ရိုးရိုး Delete ဟာ ဖိုင်တစ်ခုကို ဖျက်ပစ်လိုက်ပေမယ့် အမှိုက်ပုံးထဲမှာ ကိုယ်စားကျန်ပါသေးတယ်။
Shift Key ကို သတိထားပြီး Delete ခလုတ်ကို နှိပ်ချလိုက်မယ် ဆိုရင်တော့ အပြီးတိုင် ဖျက်ပေးသွားပါလိမ့်မယ်။ မလိုလား အပ်တဲ့ အကျိုးဆက်တွေ ဖြစ်စေနိုင်တာမို့ ‘Shift + Del’ ကို သတိထားပြီး သုံးစွဲပါ။
IE ကို ဖွင့်ရာမှာ တစ်ခါတလေ စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။
မိုက်ကရိုဆော့ဖ် ရဲ့ default home page “msn.com” ဟာ ငြီးငွေ့စရာ ကောင်းလောက်အောင်ကို ကြာမြင့်လွန်း တတ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ IE ကို ဖွင့်လိုက်စဉ်တိုင်းမှာ အဖြူထည် စာမျက်နှာ ဖြစ်နေတာဟာ ပိုပြီး မြန်ဆန် စေပါတယ်။
- www. google.com ကို သွားဖို့ အတွက် အရှည်ကြီး ရိုက်နေဖို့ မလိုပါဘူး။
- google ကို ရိုက်ပါ။
ပြီးရင် Ctrl key ကုိင်ထားပြီး Enter ခေါက်ပါ။
အဲဒီလို shot-cuts တွေကို လေ့လာရင်း သုံးစွဲရင် ပိုမြန်ဆန် စေပါတယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ network ဧရိယာ များမှာ ဘယ်သူတွေ ရှိနေသလဲ ဆိုတာ ကြည့်ရှုချင်ရင် My Network places ကနေ ကြည့်ရှုလို့ ရပါတယ်။
ပီစီတစ်လုံးကနေ နောက်တစ်လုံး ဆီကို access လုပ်ဖို့ ကို တော့ admin ခွင့်ပြုချက် ဒါမှမဟုတ် password ရယူရပါမယ်။ My Network places မှာ ‘view word group computer’ ကိုရွေးလိုက်။
- paint ပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့ ‘Ctrl+V’ ဒါမှမဟုတ် ‘File menu’ အောက်က ‘paste’ ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။ (ဤ paint နေရာမှာအခြား Clipboard ရှိတဲ့ ဓါတ်ပုံ တည်းဖြတ် ဆော့ဖ်ဝဲ တွေ photoshop corel draw စတာတွေ သုံးစွဲ နိုင်ပါတယ်။)
- (My Picture folder ထဲမှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ Image တွေကို အရင်ဆုံးထည့်ထားရပါမယ်။
Slide Show မှာ ပုံရိပ်တစ်ခု နဲ့ တစ်ခုအကြား ကြာမြင့်ချိန်က်ို စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် ပြောင်းလဲ နိုင်ပါတယ်။)
Firefox browser မှာ pop-up blocker ဆိုပြီး လုံခြုံရေး tool ပါဝင်တဲ့ အပြင် add-ons တွေနဲ့ အထူး ပိတ်ပင် တားဆီးလို့ ရနိုင်ပါတယ်။
IE ရဲ့နောက်ဆုံးထွက် version7.0 ကို install လုပ်လိုက်မယ် ဆိုရင်တော့ pop-up ပြဿနာဟာ ၇၀% လျှော့ကျ သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် browser မှန်သမျှရဲ့ နောက်ဆုံးထုတ် version ကို ရအောင် ယူထားပါ။
firefox မှာ Menubar ပေါ်မှာ Right click နှိပ်ပါ။
- အဲဒီထဲက ပေါ်လာတဲ့ customize bar ထဲကို ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ‘icon’ တွေကို ပေါင်းထည့် ပေးပါ။ IE အတွက်ကတော့ - IE ကို ဖွင့်ပါ။ - View > toolbar > customize - အဲဒီအထဲကမှ စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုပြင်ဆင် ထားတဲ့အတွက် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အချိန်မှာ လိုသလို အသုံးချနိုင်တဲ့ icon တွေ အဆင်သင့် မြန်မြန် ဆန်ဆန် ရှိနေမှာပါ။
- IE ကိုဖွင့်ပါ။
Tools Menu မှာ ရှိတဲံ့ internet options ကနေ Clear History ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
ပိုပြီး အန္တရာယ် ကင်းစေချင်ရင် ‘Cookies’ တွေကို ရှင်းပါ။ Firefox ကို ဖွင့်ပါ။ “Options” ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
- Privacy ကို ကလစ်နှိပ်တဲ့အခါမှာ box ရဲ့ အောက်ဆုံးမှာ “private data” တွေ့ရပါမယ်။ “Setting” ကို ၀င်ပြီး အမှန်ခြစ်တွေ ပေးထားပါ။
OK နှိပ်ပြီး ပြန်ထွက်ပါ။ “Always Clear my private data when I close firefox” ရှေ့ မှာ အမှန်ခြစ်ပေးပါ။ Cyber cafe မှာ သုံးစွဲဖို့ သင့်တော်စေတဲ့ tool တစ်ခုပါ။
- များသောအားဖြင့် Mouse ရဲ့ default ဆက်တင်ဟာ ပြုပြင်စရာ မလိုအောင် ကောင်းပါတယ်။ တကယ်လို့ စိတ်ကြိုက် - ပြင်ဆင်ချင်သေးတယ်ဆိုရင်
- Control Panel > System - Hardware ကို ရွေးချယ်ပါ။ - Device Manager ကို ကလစ်နှိပ်ပါ။
- ‘Mice and other pointing serices ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ mouse ကို right click နှိပ်ပြီး properties ကို စိတ်ကြိုက် - ပြောင်းလဲ နိုင်ပါတယ်။
- ကွန်ပျူတာရဲ့ စနစ်မှုာ တစ်ခုခု အမှားအယွင်း ဖြစ်နေခဲ့ရင် အရင်အတိုင်း အခြေအနေ ကောင်းလေးကို ပြန်လည် ရရှိစေနိုင်ဖို့ - System Restore ဆိုတာ ထားရှိပါတယ်။ Memory ကိုရော၊ Hard disk နေရာလွတ် များများကိုရော လိုချင်တယ် ဆိုရင် - အရင် restore point အဟောင်းတွေကို ဖျက်ပစ်ရပါမယ်။
- Start > All Programs > Accessories > System tools > Disk Clean up
> More Options အထိ ဆက်တိုက် သွားပါ။
- Start > All Programs > Accessories > System tools >Disk
Defragmenter ကို ရွေးချယ်ပါ။
- Analyzing လုပ်တာနဲ့ Defragment လုပ်တာ နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ နာရီဝက်၊ တစ်နာရီလောက် အချိန် ပေးရပါမယ်။
ဒီ tool - ဟာ window နဲ့ ‘built-in’ tool ဖြစ်ပြီး System မှာရှိတဲ့ မလိုအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေနဲ့ အမှိုက် အစအန တွေကို အထိုက်အလျှောက် - ဖယ်ရှား ပေးတဲ့အတွက် သုံးစွဲ သင့်ပါတယ်။
- ပီစီရဲ့ လိုအပ်တဲ့ ပရိုဂရမ်တွေကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် သုံးစွဲနိုင်စေဖို့ ‘Virtual memory’ တည်ဆောက် နိုင်ပါတယ်။
- ပြီးရင် “customize” box ကို ‘on’ ပြီးတဲ့ အခါမှာ C.D.E ရှိတဲ့ drive တစ်ခုချင်း စီကို လိုသလောက် virtual memory ထပ်မံ - တိုးဖြည့်ပေးထားလို့ ရပါတယ်။ ပြီးရင် set command ကို ကလစ်နှိပ်ပြီး OK နဲ့ ထွက်ပါ။
- Kkeyboard က windows Logo Key လေးကို ဖိထားပါ။ ‘L’ ကို နှိပ်ပါ။ - Shutdown icon ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်သလို လိုအပ်သလို ပြန်လည် ၀င်ရောက်နိုင်တဲ့ Log-on buttom ကလေးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
မျှဝေပေးပို့ သူ ။ pyae Thein Oo။နှင့် salai zamte
14, Dec ,2010။
ဖတ်မိသမျှ ပြန်လည်တင်ပေးခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။မြန်မာသူငယ်ချင်းများ ဆိုဒ်ကလေးမှ ဖော်ပြပေးထားပါသည်။
Window7 Launcher (For Andriod Phone)
ဖုန်ုးအဝင်ကေားလေးမှာ flash အချက်ပြမီးလေးနဲ့ ထားချင...
အွန်လိုင်း ငွေရှာနည်း (၃)
ဖုန်းဆော့ဝဲများစွာ တနေရာထဲမှာဗျာ ဘာတွေလဲတော့မသိဘူး...
ကိုုရီးယား လက်ကွက်ကျင့် ကျင့်ချင်သူများ ဖောင့်မလိ...
android ဖုန်းတွေအတွက် လက်မလွတ်သင့်တဲ့ apk
ဖေ့ဘွတ် မှာ gif ဖောမတ် နဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ ပုံအရှင...
Android ဖုန်းအတွက် အရမ်းလှတဲ့ ပုံအရှင် Wallpaperေ...
Android Phone ထဲရှိ Icon တွေကို နှစ်သက်ရာပုံနဲ့ မြ...
memory card များ ဖွင့်မရ ပြသနာ ဖြေရှင်းနည်း
Android Phone ကို အသံနဲ့ Lock ချင်သူများ
ဖုန်းအသစ်ပြောင်းတဲ့အခါ နဲ့SMS တွေ များလာလို့အမ...
Android ဖုန်းမှာ အင်တာနက်ကို Desktop Computer ဖြင်...
5:02 PM | Posted by Myanmar Collection Tango Softw...
Android ဖုန်းများတွင် 3G Internet Setting ထည့်နည်း...
Internet Download Manager v 1.2 Fro Android
ကွန်ပျူတာမှာ မှားဖျတ်မိတာတွေ ပြန်ယူလို့တဲ့ဆော့ဝဲလေ...
ိDVD COPY လုပ်ချင်သူများ မရတဲ့အခွေတွေလဲ ရတယ်ဗျာ
၀င်းဒိုးအားလုံးအတွက် အရေးပေါ်သုံး Program
အွန်လိုင်းမှာ ငွေရှာနည်း (၂)
အကောင်းဆုံး ဗိုင်းရပ်(စ်) သတ်ဆော့ဝဲ
Aurora 3D Presentation 2012 (နောက်ဆုံးထွက်)
Win-7 Admin Pass Hacking
အင်္ဂလိပ်စာ ဆရာလွတ် လေ့လာချင်ကြသူများ
Asphalt5ဒီVersionလေးက ဖုန်းတော်တော်များများမှာေ...
moboro ကွန်ပျူတာနှင့် Android mobile ချိတ်ဆက်မှုဆော...
သင့်ရဲ့android ဖုန်း ထဲ မှာ မြေအိုးလေးတွေလုပ်ကြမယ်...
Huawei ဖုန်းမှာ talk ကိုသုံးလို့ရပါပြီ။
ဖုန်းခလုတ်မနှိပ်ပဲ ဖုန်းလှုပ်တာနှင့် ဖုန်းပြေားလို့...
သီချင်းချစ်သူများအတွက် အဆိုတော်များ၏ သီချင်းစီရီးလ...
Facebook အကောင့်သစ်ဖွင့်လိုက် Lock ကျလိုက်နဲ့မို့ ...
သူငယ်ချင်းတို့အတွက် MP3 သီချင်းကောင်းလေးများစွာ စု...
facebook အဟက်မခံရအောင် ကာကွယ်နည်းလေးပါ
Android ဖုန်းထဲကို ( အင်္ဂလိပ် - မြန်မာ )အဘိဓာန် ထည်...
Myanmar Zodiac ( Android Application )
Andorid Phone System Security တည်ဆောက်ခြင်း
အဆင့်မြင့် Photoshop မှတ်စုများ (မြန်မာလို စာအုပ်)...
အသက် 18နှစ် အထက် ယောက်ကျားလေးများသာ ကစားရန် Leisur...
Window တက်တာမြန်စေမယ့် HiJackThis
လှုပ်ရှားနေတဲ့ .gif ဖိုင်လေးလုပ်ရအောင်(Screen.Gif.1...
သူငယ်ချင်းတို့ မေ့တတ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အားသွင်းထားလို...
တစ်သောင်းတန် ငွေကဒ်ကို ငွေမကုန်အောင် ဟက်နည်းလေးပါ
Android phone တွေမှာ power ဖွင့်လိုက်ရင်မြည်တဲ့အသံ...
သူငယ်ချင်းတို့ဖုန်းထဲမှာ ဘီယာသောက်ပြီး ပြေးတဲ့ ဂိမ...
ဖုန်းတည် miss call လာပေးတဲ့သူရဲ့ တည်နေရာကို ပြတဲ့ေ...
ဓါတ်ပုံတွေပြင်မယ့် Photo Grid-Collage.apk လေးပါ။
Android APK တစ်ခုကို Edit လုပ်ကြည့်ခြင်း
Android User Guide Ebook 2013 ( Myanmar Version )
Wondershare Data Recovery for Android 1.0.0.18 + K...
Android ကို PC မှာ စမ်းသပ်ချင်တဲ့သူငယ်ချင်းများအတွ...
Vroot latest update 1.4.2
Root Tool အသစ်လေးတစ်ခု(Chinese Version)
Samsung Galaxy S4 နဲ့ထွက်ရှိလာတဲ့ Devices အားလုံးအ...
Edition: Myanmar | Apple Section (iOS)iOS appl...
Phone ကို ဓာတ်မီး အဖြစ်သုံးပြီး အရေးပေါ်အချက်ပြ နည်...
Androit ဖုန်းကို Memory Card မဖြုတ် ကြိုးမသွယ်ပဲ အ...
ချစ်သူ မူပိုင်ရှိသူများ နှင့် မူပိုင်ကို ချစ်တဲ့သူ...
Remote Mouse ဆိုတာကတော့ iPhone, iPad ကနေတစ်ဆင့် မိ...
့မြန်မာ browser လေးပါ
Huawei Emotion UI ပါဝင်တဲ့ဖုန်းတွေအတွက် Sony Xperi...
www.google.com.mm မှာ မြန်မာစာကို မှန်ကန်စွာ မြင်ရ...
Teaches Typing Software
Android Software Collection
မိန်းကလေးများ ဒေါင်းမဆော့ရ ဂိမ်း
ကွန်ပျူတာမှာCalculator ဖြင့် အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း...
Android phone တွေမှာ Download Speed ကို မြင့်ကြည့်...
Dropox မှာ 50GB ဖရီးရအောင်ဖုန်းကနေ ဟက်ကြည့်ရအောင် ...